लक्ष्य डिजाइनर टीम वर्कको बीसौं बर्ष मनाइरहेको छ - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / लक्ष्य डिजाइनर टीम वर्कको बीसौं बर्ष मनाइरहेको छ
लक्ष्य डिजाइनर टीम वर्कको बीसौं बर्ष मनाइरहेको छ
लक्ष डिजाइनर सहयोग आश्चर्यजनक छन्। हडताल र चमकदार हुनुको अलावा, तिनीहरू पनि साहसी र बहादुर छन् र एकै समयमा, लागतको एक अंशमा सजीलो पहुँचयोग्य। उनीहरूले खाम फ्याँक्छन् र ग्राहकलाई डिजाइनर फेशनको बारेमा उनीहरूलाई के थाहा छ जान्न आग्रह गर्दछन्। त्यसकारण, टिम वर्कको २० औं वर्षको उपलक्ष्यमा लक्ष्यले अचम्मका टुक्राहरू सुरूवात गर्न छनोट गर्दछ। यी टुक्राहरू हटकके जस्तै बेचिन्छ, तर यहाँ शीर्ष उत्तम विक्रेताहरू छन्।
आइज्याक मिज्राही द्वारा पुष्प प्रिन्ट स्लीवलेस स्क्वायर नेक
यस स्क्वायर नेक फ्लोरल प्रिन्ट ड्रेसको साथ मिज्राहीसँग तपाईंको आफ्नै क्षणहरू बनाउनुहोस्। रातो र सुन्तला रंगमा उपलब्ध, यस फ्लेर पोशाकले तातो र बोल्ड देखा पर्दछ साथै लचिलो, फूल फुलेको महिला प्रभावको साथ। एक स्क्वायर नेक्ललाइन चमकदार ढंगमा जोडीदार ढ struct्गले संरचित उपस्थितिको लागि फ्लेर्ड स्कर्टको साथ। सुन्दर निर्माणले पोशाकलाई मात्रा प्रदान गर्दछ, जुन आधुनिक र प्रिय छ। तपाइँको सानो सामानहरू भण्डार गर्न यसको छेउमा जेबहरू छन्। कार्यक्षमता र शैलीको एक निर्दोष मिश्रणको लागि, तपाईंले यस पोशाकलाई विचार गर्नुपर्दछ।
शिबोरी थकानबाट प्रिन्ट एल्बो स्लिभ फ्रन्ट-बटन मिनी शर्टद्रेस
यो मिनी शर्ट पोशाक परम्परागत शिबोरी प्रिन्टहरूको नक्कल गर्न बनाइएको थियो। यो सबै भन्दा राम्रो ककटेल पोशाक हो जुन तपाईं गर्मी मौसमको अन्त्यमा लगाउन सक्नुहुन्छ। गर्मी रंगमा अचम्मको रूपमा रचनात्मक रye्ग विधिसँगै बनाइएको, यस मिनी शर्ट ड्रेसले तपाईंको गर्मीको अलमारीमा राम्रो थप गर्दछ। सेतो र निलोमा अस्पष्ट प्रिन्टले यस पोशाकलाई आउटडोर विवाह र ककटेल पार्टीमा उत्तम पोशाक बनाउँदछ। क्लासिक उपस्थितिको लागि, यो पोशाक बटन-फ्रन्ट सिल्हूटको साथ एकीकृत गरिएको छ अतिरिक्त अतिरिक्त परिभाषाको साथ साथै पॉलिश फ्लेयरको लागि बिन्ती सहित। यो अतिरिक्त सुविधा को लागी साइड जेब छ। पूर्ण हेराईका लागि यो पोशाक नग्न पहाडको पहेंलो वा पहेंलो वा निलो चप्पलको साथ पेयर गर्नुहोस्।
ठूलो टोट बैग
हन्टर टीम अप हंटर को लागी प्रख्यात छ को एक विस्तार को पेशकश, र ठूलो ढोका झोला एक राम्रो उदाहरण हो। यो एक सेलफोन जस्तै आफ्नो सामान को धेरै समायोजित गर्न को लागी पर्याप्त ठूलो छ। यो ज्वलन्त सुन्तला अस्तर साथै सुविधाहरु बाहिरी र अतिरिक्त संगठन को लागी भित्री पकेट छ। यो एक सुपर हो गुणस्तर ढोका झोला कि मात्र $ 35 को लागी किन्न सकिन्छ। अब एउटा समात्नुहोस्!
फिलिप लिमद्वारा लामो स्लिभ फ्रन्ट बटन-डाउन ट्रेंच कोट
के तपाईं कुनै पनि औपचारिक घटनामा लगाउनको लागि खाई कोटको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? फिलिप लिमको लामो बाहुलो भन्दा बढी नहेर्नुहोस्। एक कुरकुरा ट्रेंच कोटले तपाईंको लुकलाई टप अप गर्न को लागी एक उल्लेखनीय तरिका बनाउँदछ, र यो ट्रेंच कोट this.१ फिलिप लिमबाट, तपाईंलाई चलाखी र ड्यापर देखाउन मद्दत गर्दछ, एक सुन्दर तरीकामा। गाढा र colorले परिष्कारको वातावरण उधारो दिन्छ जो बटन-डाउन शर्ट, चिनो, गाढा जीन्स र अधिकको समन्वयको साथ। कोलरेड नेकलाइन परिष्कृत डिजाइनको एक स्पर्श ल्याउँछ।
फोर-व्हील रोलिंग सूटकेस मिसोनीबाट
के तपाइँ एक सूटकेस को लागी खोजी गरीरहनु भएको छ गुणस्तर तर स्टाइलिश पनि? लक्षित को लागी Missoni बाट चार पाel्ग्रा रोलिंग सूटकेस भन्दा बढि नहेर्नुहोस्। यो एक उल्लेखनीय प्रिन्ट संग आउँछ, र क्लासिक शेवरन zig-zag ढाँचा जो Missoni प्रसिद्ध छ सबै भन्दा राम्रो साथी मा सजिएको छ जब यात्रा। यसको अचम्मको शैली र उच्च को बावजुदगुणस्तर शिल्प कौशल, तपाइँ मात्र $ 160 को रूप मा कम को लागी यो सूटकेस हुन सक्छ।